CAD for Myanmar: T3D-02: ကြောင်လိမ်လှေခါး (3D Spiral Staircase) ဆွဲကြရအောင်
T3D-02: ကြောင်လိမ်လှေခါး (3D Spiral Staircase) ဆွဲကြရအောင်
တောင်းဆိုတာတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် ကျနော် ကြောင်လိမ်လှေခါး (3D Spiral Staircase) ဆွဲဖို့ကို အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားရေးထားပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ပါ။ ဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီး ကိုယ်စိတ်ကူးရှိရင် ရှိသလို ထပ်ဖြည့်သွားလို့ ရမှာပါ။
ကျနော်ဆွဲမယ့် ကြောင်လိမ်လှေခါးရဲ့ အခြေခံလေးတွေကို အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
လှေခါးတခုလုံးကို Radius = 4’ 6” နဲ့ အလယ်တိုင်ကို Outer Radius = 5”, Inner Radius = 3” ထားထားပါတယ်။ တိုင်အပိတ်ထားချင်လည်း အခြေခံရသွားပြီးတဲ့နောက် ဆွဲကြည့်နိုင်ပါတယ်။ လှေခါးထစ် ၁၅ထစ် ထားပါတယ်။ (မြန်မာလူမျိုးများက “စုံ”မထားကောင်းဘူးဆိုပဲ။ ကျနော်လည်း ဘာကြောင့်မှန်း မသိဘူးနော်။ လှေခါးဆံက အတွင်းဘက် ငိုက်ရင် အိမ်ရှင်ခိုက်တယ်။ အပြင်ဘက် ငိုက်ရင် လက်သမားခိုက်တယ် ဆိုတာကတော့ လှေခါးဆံကို တည့်တည့်ဖြစ်အောင် လက်သမားကို ကြပ်တာလို့ ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ အိမ်ရှင်ကလဲ အခိုက်မခံနိုင်သလို လက်သမားကလည်း ဘယ်အခိုက်ခံနိုင်မလဲလေနော်။) ဆိုတော့ တထစ်နဲ့တထစ်ကြား ထောင့်အကွာအဝေးက 24 Degree ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်က လွယ်လွယ်ပဲ လှေခါးဆံအထူကို 1.5” ထားသလို လှေခါးဆံအပိတ်ကိုလည်း 1.5” ပဲထားပါတယ်။ ညာဘက်က Section ပုံမှာပြထားပါတယ်။ လက်ရန်းတိုင်ကို Diameter = 2” ထားပြီး လှေခါးဆံရဲ့ အပြင်အ၀န်းကနေ 2” အကွာမှာ Centre ထားထားပါတယ်။
လှေခါးထစ် တထစ်ရဲ့ အမြင့်ဟာ 8” ဖြစ်ပြီး ၁၅ ထစ်ထားထားလို့ အထပ်တထပ်နဲ့တထပ်ကြားအမြင့်ကတော့ 10’ 8” အကွာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်နဲ့အတူတူ လိုက်ဆွဲကြည့်ရအောင် . . . ။ ကျနော်က Command Line ကိုအားပြုပြောပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ သန်သလို လိုက်လုပ်ကြည့်လည်း ရပါတယ်။
ပထမဆုံး Units Setting ကိုပြင်ပါ။
Length ကို Architectural နဲ့ Precision ကို 1/256” အထိ ယူထားလိုက်ရအောင်။ အရင်တုန်းကတော့ Precision များများယူလေ RAM Memory စားလေဆိုပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဘာမှမပြောပလောက်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့ အမြင့်ဆုံးသာယူထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် OK နဲ့ထွက်ထားလိုက်ပါ။
ပြီးရင် Circles တွေစဆွဲမယ်။
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: (ကြိုက်ရာ၊ အဆင်ပြေရာတနေရာကို Click လုပ်လိုက်ပါ။)
Specify radius of circle or [Diameter] <0'-1 1/2">: 4'6" <Enter>
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: @ <Enter> (ကျနော်တို့ရဲ့ Drawing မှာ စောစောက Cirlce ရဲ့ Centre point တခုပဲ ရှိသေးတော့ Last Point အနေနဲ့မှတ်ထားပါတယ်။ အခုဗဟိုတူ စက်ဝိုင်းတွေ ဆွဲမှာဆိုတော့ ဒါကို အသုံးချလိုက်တာပါ။)
Specify radius of circle or [Diameter] <4'-6">: 5" <Enter>
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: @ <Enter>
Specify radius of circle or [Diameter] <0'-5">: 3" <Enter>
ဒါဆိုဗဟိုတူ Circles ၃ခုရပြီ။
Specify first point: Circle တွေရဲ့ Centre ကိုဖမ်းပါ။ (Object Snaps ကိုဘယ်လိုအသုံးချရမယ်ဆိုတာ
"2D-05: Object Snaps ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံများ" မှာဖော်ပြပြီးပါပြီ။)
Specify next point or [Undo]: အပြင်ဘက်ဆုံး Circle ရဲ့ Quadrant ကိုဖမ်းပါ။
Specify next point or [Undo]: <Enter>
Command: ROTATE <Enter>
Select objects: l <Enter> (နောက်ဆုံးဆွဲထားတဲ့ Line ကို ပြန်ရွေးတာပါ။)
Specify base point: (Circles တွေရဲ့ Centre ကိုဖမ်းပါ။)
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0.00>: c <Enter> (Rotate လုပ်ရင်း တလက်စတည်း Copy ကူးလိုက်တာပါ။)
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <12.00>: 24 <Enter>
အခုဆိုရင် ကျနော်အထက်မှာ ပြထားသလိုရပြီနော်။ ကဲ လက်ရန်းတိုင်အခြေကို ဆက်ဆွဲရအောင်။
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: အပြင်ဘက်ဆုံး Circle ရဲ့ညာဘက် Quadrant ကိုဖမ်းပါ။
Specify radius of circle or [Diameter] <0'-3">: 1 <Enter>
Select objects: l <Enter> (Last object ကိုပြန်ကောက်တာပါ။)
Specify base point or [Displacement] <Displacement>: -2,0 (Displacement တန်းပေးလိုက်တာပါ။)
Specify second point or <use first point as displacement>: <Enter>
Select objects: l <Enter>
Select objects: l 1 found
Specify base point: Circles တွေရဲ့ Centre ကိုဖမ်းပါ။
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <24.00>: 12 <Enter>
Command: OFFSET <Enter>
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <0'-1 1/2">: 1.5" <Enter>
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Line တခုကိုရွေး
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: ရွေးထားတဲ့ Line ရဲ့ အပေါ်ဘက်ကို Click ပေး
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: နောက် Line တခုကိုရွေး
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: အပေါ်ဘက်ပဲ Click ပေးပေးပါ။
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: <Enter>
Select cutting edges ... Radius 5” ရှိတဲ့ Circle ကိုရွေးပါ။
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: Specify opposite corner:
Crossing နဲ့ ဖြတ်ချင်တဲ့ ၄လိုင်းစလုံး ရွေးလိုက်ပါ။
အပြင်ဘက်ဆုံး နှစ်လိုင်းကို ရွေးပါတယ်။
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: မလိုချင်တဲ့ Circle ရဲ့အပိုင်းကို ဖြတ်ဖို့ ရွေးပါတယ်။
အခုဆိုရင် ကျနော်အပေါ်မှာ ပြထားသလို လှေခါးဆံတခုကို တည်ဆောက်လို့ ရပါပြီ။ ပြီးရင် 3D Extrude ပြစ်လို့ရအောင် Boundary လုပ်ပါ့မယ်။
Boundary Creation Dialog Box ထဲက Pick Point Button ကိုရွေးပြီး ကျနော်အထက်မှာ အနီရောင်အစက်လေးတွေနဲ့ ပြထားတဲ့ ဧရိယာ ၃ခုကို ရွေးလိုက်ပါ။
Command: VPOINT <Enter>
Current view direction: VIEWDIR=0'-0",0'-0",0'-1"
Specifyaview point or [Rotate] <display compass and tripod>: r <Enter>
Angle in XY plane from X axis <270.00>: 225 <Enter>
Enter angle from XY plane <90.00>: 30 <Enter>
ပြီးရင် ပထမဆုံးလှေခါးထစ်ကို ဆွဲဖို့ အမြင့် 8” အရင်တင်ထားရအောင် Move လုပ်ပါ့မယ်။
Select objects: မှာ Circle - ၃ခု၊ Boundary - ၃ခုကိုရွေးပါတယ်။
Select objects:6found
Specify base point or [Displacement] <Displacement>: 0,0,8 <Enter> (ကျနော်တို့ကဘာမှ unit မထည့်ရင်လည်း အနိမ့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Inch ပဲယူပါလိမ့်မယ်။ စမ်းသုံးကြည့်နိုင်အောင် တမင်ထည့်ရေးပေးလိုက်တာပါ။)
ကျနော် Move လုပ်တုန်းက ဘာလို့ တခုချင်း Select လုပ်ကောက်သလဲဆိုတာ သိလောက်ပါပြီ။ အောက်က ကျန်ခဲ့တဲ့လိုင်းတွေ Erase သာလုပ်လိုက်ပါတော့ . . . ။
ပြီးရင် ကျနော် အနီစက်လေးတွေပြထားတဲ့ ဧရိယာ ၃-ခုကို -8” နဲ့ Extrude လုပ်ပါ့မယ်။
Command: EXTRUDE <Enter>
Current wire frame density: ISOLINES=16, Closed profiles creation mode = Solid
Select objects to extrude or [MOde]: 1 found,2total
Select objects to extrude or [MOde]: 1 found,3total
Select objects to extrude or [MOde]: <Enter>
Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle/Expression] <3'-6">: -8 <Enter>
ကျန်တဲ့ ၂ခုကိုတော့ -1.5” နဲ့ Extrude လုပ်လိုက်ပါ။
Select objects to extrude or [MOde]: Specify opposite corner:2found
Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle/Expression] <-0'-8">: -1.5 <Enter>
ကဲ . . . အခု အောက်မှာပြထားသလို ရနေပြီနော်။
Command: SUBTRACT <Enter>
Select objects: 1 found (Cylinder အကြီးကို ရွေးပါ။)
Select objects: 1 found (Cylinder အသေးကို ရွေးပါ။)
တလက်စတည်း လက်ရန်းတိုင်လေးပါ ထည့်လိုက်ရအောင်။
Select objects to extrude or [MOde]: 1 found (လက်ရန်းအတွက် ထားထားတဲ့ 2” Diameter Circle လေးကို ရွေးပါတယ်။)
Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle/Expression] <-0'-1 1/2">: 3.5' <Enter>
ကဲ . . . အခုဆိုရင် လှေခါးထစ်လေးတခုကို လက်ရန်းတိုင်လေးအပါနဲ့ အဆင်သင့်ရနေပါပြီ . . . ။ ညာဘက်က ပုံက Hide လုပ်ကြည့်ထားတာပါ။ ကျနော်က Union လုပ်တဲ့အခါ လက်ရန်းတိုင်ကို ချန်ထားခဲ့တာက နောက်ပိုင်းမှာ Material ပေးချင်ရင် သီးခြားစီ လွယ်လွယ်ပေးလို့ ရအောင် ချန်ထားခဲ့တာပါ။
ကဲ လှေခါးထစ်တွေ ထပ်ထပ်ဆွဲကြရအောင် . . . ။
Select objects: Specify opposite corner:2found (လှေခါးထစ်နဲ့ လက်ရန်းတိုင်ကိုရွေးပါတယ်။)
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: 0,0,8 <Enter>
ပထမအပေါ်တည့်တည့်ကို Copy ကူးလိုက်ပြီ။
Select objects: 1 found,2total (Copy ကူးထားတဲ့ လှေးခါးထစ်နဲ့ လက်ရန်းကို ရွေးပါတယ်။)
Specify base point: (အလယ်တိုင်ရဲ့ Centre ကိုရွေးပါတယ်။)
အဲဒီလို Copy & Rotate ကို ၁၅ခါ လုပ်ပါ့မယ်။ တကယ်တော့ အပေါ်ဆုံး ၁၆ထစ်မြောက်လှေခါးထစ်ရဲ့ အပေါ် မျက်နှာပြင်ဟာ အပေါ်ထပ်ကြမ်းခင်းမျက်နှာပြင်နဲ့ တညီတည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကဲ ဆက်ပြီး လက်ရန်းဆက်ဆွဲလိုက်ကြရအောင် . . . ။
Command: HELIX <Enter>
Number of turns = 1.00000000 Twist=CCW
Specify center point of base: (အလယ်တိုင်ရဲ့ Centre ကိုရွေးပါတယ်။)
Specify base radius or [Diameter] <0'-0">: 4’4” <Enter> (လက်ရမ်းတိုင်ရဲ့ Centre ဟာ လှေခါးတခုလုံး Radius 4’6” အ၀န်းက 2” ခွာထားတာ သတိရမှာပါ။)
Specify top radius or [Diameter] <4'-4">: <Enter>
Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist] <0'-0">: t <Enter>
Enter number of turns <1.00000000>: 1 <Enter>
Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist] <0'-0">: 10’ <Enter>
လက်ရမ်း Sweep လုပ်မဲ့ Path ကို အရင်ဆွဲတာပါ။
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: (ခုနကဆွဲထားတဲ့ Helix အောက်ခြေက End Point ကို ဖမ်းပါတယ်။)
Specify radius of circle or [Diameter] <0'-0">: 1.5 <Enter>
Current positive angle: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0.00
Select objects: 1 found (နောက်ဆုံးဆွဲထားတဲ့ Circle ကိုရွေးပါတယ်။)
[Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2points]: x <Enter>
<0,0,0>: လှေခါးဆံအပိတ် အောက်ခြေလိုင်းရဲ့ End Point ကို ဖမ်းပါတယ်။ အနီစက်ကလေးနဲ့ အောက်ပုံမှာ ပြထားပါတယ်။
ကျနော် အထက်မှာပြသလို တွေ့နေရမှာပါ။
Command: SWEEP <Enter>
Select objects to sweep or [MOde]: 1 found (စောစောက နောက်ဆုံးဆွဲခဲ့တဲ့ Circle လေးကို ရွေးပါတယ်။)
Select objects to sweep or [MOde]: <Enter>
Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]: (ဆွဲထားတဲ့ Helix ကိုရွေးပါတယ်။)
Specify base point or [Displacement] <Displacement>: 0,0,4’2” <Enter>
(လှေခါးထစ်တထစ်အမြင့်က 8”၊ လက်ရန်းတိုင် အမြင့်က 3’ 6” ဆိုတော့ နှစ်ခုပေါင်း 4’ 2” တင်လိုက်တာပါ။)
Specify base point: (အလယ်တိုင်ရဲ့ Center ကိုဖမ်းပါတယ်။)
ကဲ အခုဆိုရင် ကျနော်တို့ အလိုရှိသလို ကြောင်လိမ်လှေခါး (3D Spiral Staircase) တခုဆွဲလို့ ရပါပြီ။ ဆွဲနေရင်း မကြာ၊ မကြာ Save လုပ်ဖို့လဲ သတိပေးပါရစေ။ ကျနော်ရေးပြထားတာ အခြေခံပြီး အလိုရှိသလို ဆက်ဆွဲနိုင်ကြပါစေ။
Posted by Wise Guy at 2:48 AM
yae November 24, 2011 at 7:00 AM
အဲဒီလှေခါးလက်ရန်းဆွဲတာမှာ ရွာလည်နေတယ်ဗျ။ HELIX ဆွဲတာအကိုလုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်တာပဲ။အပေါ်ကိုမရောက်ဖူးဖြစ်နေတယ်။
ကူညီပါဦးဗျာ။ SWEEP ကိုတော့လုပ်ကြည့်တာရတယ်။လက်ရမ်းအတိုင်း ပြေပြေလေးတက်သွားတာမှာမရတာဗျ။ကျေးဇူးပါပဲဗျာ။